❤Imitshato yeMonarch, Yiya kwi-OldTown 3BR # 066781 - I-Airbnb
❤Imitshato yeMonarch, Yiya kwi-OldTown 3BR # 066781
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguSkip
Imizuzu eyi-5 xa uhamba ngemoto usiya kwiCoachella Music Festivals. Okanye eyona ndlela ilula kukufumana isithuthi ukusuka kwiresort ekufutshane yaseLa Quinta.
IWalkability yeenkwenkwezi eziyi-5, i-Luxury, icocwe kakuhle yaza yahonjiswa ngeegadi eziluhlaza, icitrus orchard kunye nepuli/i-jacuzzi enamanzi ashushu. Iveranda yabucala enezihlalo eziyi-12 kunye neendawo zokuphumla eziyi-3, i-Infrared Gas Grill, i-Egg Smoker kunye nomngxuma womlilo.
Igumbi le-billiard elinendawo yokubasa umlilo - Igumbi Elihle elinebhari - Vula ingcamango kwikhitshi elinento yonke ye-Gourmet, iiTV ezicacisa kakhulu.
Indawo ithi yonke. Njengoko ungena kwiLa Quinta Cove enembali apho iGolf Course yokuqala kuyo yonke indawo yePalm Springs yakhiwa emva kweminyaka eyi-30, ubona iintaba ezintle zaseSanta Rosa ezijikeleze iCove. Njengoko usondela kwindawo yakho entlango ene-cactus entle ejikeleze iintaba kuba usondele kakhulu kuzo. Emva koko ungena kwigeyithi eya kwi-resort yakho yabucala enodonga olupheleleyo egadini nakwiveranda. Uyaqaphela ukuba ipuli yamanzi asandul 'ukwakhiwa enengxangxasi epholileyo nendawo yokubraya.
Ukuba ungumntu othanda ukudlala phandle, igalufa, iPolo/Umthandi wehashe, umhambi womthendeleko, okanye ufuna iivenkile zokutyela ezikumgangatho wehlabathi ukuze utye kuzo, ngoko le yindawo ekulungeleyo. Nyuka intaba, uhambe ngebhayisekile, i-rollerblade uze wonwabele intlango kunye neentaba ezintle. Imizuzu ukuya kwiCoachella okanye iStagecoach Music Festival kwiPolo Grounds ikumgama ongaphantsi kweemayile eziyi-4. Hamba okanye uhambe uye kwilali yakudala xa unyuka intaba apho uza kufumana ezinye zeevenkile zokutyela ezintle kakhulu kule ndawo. Ngaphandle kweCoachella Music Festival siseduze neendawo zePolo, iH.I.S. thermal, iRiverside County Date Festival Indio, iLa Quinta Arts Festival kunye neIndiya Wells Tennis Gardens.
Bonisa zonke 76 izinto onokuzisebenzisa
4.97 · Izimvo eziyi-147
Hamba okanye uhambe ngebhayisekile uze uhambe kwilali yakudala uhamba ngeenyawo uze ubone ezinye zeevenkile zokutyela ezintle kakhulu kule ndawo. Kukho ibala lokudlala, idayimane ye-baseball, ibala le-basketball, kunye nezixhobo zokujima esitratweni.
Isixeko sibeke umthetho wokuba akuzukubakho zixhobo zomculo ngaphandle kweNdawo Yokuqeshisa Yeholide.
Isixeko saseLaQuinta sinikwe ilayisensi:
Umbuki zindwendwe ngu- Skip
Works full time on our 3 vacation rentals and has long term rentals in California and Texas. Retired from 30 year banking career as a Vice President of Commercial Lending and Moni…
Undwendwe luza kuzingenela kwikhiphedi ye-elektroniki. Ngamanye amaxesha umnikazi ukufutshane.
Inombolo yomthetho: 066781
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- La Quinta